Fanafainganana ny famokarana singa indostrialy | Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
INDUSTRIES / Fivoarana ny vokatra
Prototyping dia hetsika iray manan-danja amin'ny ankamaroan'ny fizotran'ny vokatra vaovao. Na hikaroka fotoana vaovao na hanadio ny vahaolana efa misy, ny prototyping dia mety ho fitaovana sarobidy.
CreateProto dia mpiara-miasa matoky amin'ny serivisy prototyping fampandrosoana ny vokatra manerantany. Ny ekipan'ny injenierantsika efa za-draharaha dia nanampy ny mpanjifa bitika sy salantsalany ary orinasa hamadika ny hevitry ny vokatra ho zava-misy amin'ny fanomezana prototyping sy famokarana tsy manam-paharoa.
Prototype-to-Production ho an'ny fizotran'ny fampandrosoana ny vokatra
Prototype Iterations amin'ny fitantanana vokatra
Ny paikadin'ny orinasa dia novaina mba "hamaly haingana ny fitakiana tsena", ary ny anton'ora dia mihoatra ny zava-drehetra. Eo ambanin'ny fepetra takiana, ny fifaninanana orinasa dia miankina amin'ny fomba hamoronana prototype haingana araka izay azo atao hanamarinana ny volavolan'ny mpamolavola vokatra, ary hahatonga ny vokatra vaovao handeha haingana kokoa amin'ny tsena.
Ny fampiroboroboana ny vokatra amin'ny dingana voalohany dia dingana lava sy sarotra mandra-pahatongan'ny famolavolana hevitra ho an'ny fampandrosoana prototypa. Na izany aza, tena ilaina io dingana io alohan'ny hifindrany amin'ny famokarana betsaka. Raha ny marina, ny prototypes vokatra dia azo hamarinina mandritra ny famolavolana sy ny fampandrosoana rehetra, ao anatin'izany ny maodelin'ny konsep, ny prototypes fampisehoana, ny prototypes miasa, ny prototype maotera ary ny famokarana ambany. Ny fampiasana teknikan'ny prototype mety dia mety hahatonga ny fizotran'ny fampandrosoana vokatra vaovao ho mavitrika sy hahomby kokoa, hampihena ny vintana tsy fahombiazana.
Manan-danja ireo prototypes vokatra amin'ny fizotran'ny fampandrosoana
Fantaro sy zahao ireo hevitra. Manamboara ny hevitry ny vokatra ho lasa sehatra azo tanterahina eo am-piasana hametraka ny antsipiriany mitsikera ary hahatakatra tsara ny tanjon'ny famolavolana amin'ny alàlan'ny prototypes of proof-of-concept.
Ampitao tsara ny hevitra. Ny maodely fampisehoana an-tsary dia manome hery ny mpamorona hizara ny heviny amin'ireo mpiara-miasa aminy, mpanjifa ary mpiara-miasa aminy mba hanamorana ny valiny mazava sy azo ampiharina.
Mamolavola kokoa ny famerenana azy io. Fampivoarana prototype mandeha ho azy dia azo ampiasaina hizaha toetra iterations ny famolavolana sy hahatonga lafatra ny zava-bitan'ny vokatrao. Avelao ny olana rehetra ho hita sy ahitsy alohan'ny hahatongavana amin'ny vokatra farany ary hampihena ny risika eo amin'ny orinasa.
Mifindra amin'ny famokarana feno amin'ny fahatokisana. Ny famoronana prototypes injeniera mifandraika amin'ny vokatra farany dia manamora ny fanamarinana ny famolavolana, ny injeniera ary ny fahaizan'ny mpamorona amin'ny fizotran'ny fampandrosoana prototype alohan'ny hampiasana vola amin'ny fitaovana lafo vidy ary hametrahana azy ireo amin'ny famokarana.
Famokarana habetsahan'ny vidiny ambany mahomby. Fitaovana haingana sy famokarana habetsaky ny ambany dia afaka mampifanaraka ny elanelana misy eo amin'ny prototype sy ny famokarana, ary hahatonga ny vokatrao handeha haingana kokoa amin'ny tsena amin'ny vidiny mirary.
Ny fahaiza-manaon'ny CreateProto dia manome fanampiana feno amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fampandrosoana rehetra
CreateProto dia nanolo-tena hanome famolavolana prototypa vokatra haingana sy haingana ary vahaolana amin'ny famokarana haingana ho an'ny sehatry ny orinasa rehetra amin'ny indostria, na inona na inona manomboka amin'ny varotra ka hatramin'ny vokatra mpanjifa na amin'ny fitaovana sy fitaovana amin'ny vokatra nomerika sy fitaovana ao an-trano. Ny portfolio-n'ny famokarana prototype vokatra dia miantoka ny fahamendrehan'ny famolavolana, mahafaly ny fanandramana ary ny fanamarinana, ary farany dia mitondra fahombiazan'ny orinasa.
Mandritra izany fotoana izany, miezaka izahay mba ho mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana ny vokatra tsara indrindra amin'ny orinasa. Manam-pahaizana manokana amin'ny haitao isan-karazany prototyping sy manufacturing isika, manome machining CNC, fanonta 3D, fanariana fantsom-bokatra, fampitaovana haingana ary famolavolana tsindrona ambany, izay mitazona ny sisin'ny fifaninanana miaraka amin'ny serivisy vaovao sy ireo mpiasa tena mahay. Hiara-miasa izahay - ary miaraka aminao - isaky ny dingana amin'ny famolavolana ny vokatra sy ny fizotran'ny fampandrosoana mandra-pamokarana prototype.
Fampiharana prototype ho an'ny fampandrosoana ny vokatra amin'ny indostria rehetra
Fampitaovana sy fitaovana prototyping
CreateProto dia manao prototypa vokatra marobe ho an'ny fampiasana fitaovana sy fitaovana miaraka amina plastika sy metaly amina injeniera amin'ny fampiharana maro. Miaraka amin'ny fitaovana mitovy amin'ny vokatra farany, ny prototypes dia maka tahaka ny zava-misy mekanika, ny herinaratra, ny fanoherana simika, ny toetra mafana ary ny fitsapana ny fiainana amin'ny vokatra farany. Mba hahafantaranao tsara ny fomba fiasan'ny ampahany na ny fivondronana rehefa iharan'ny tontolo iainana tena izy izay misolo tena izay ho hitany amin'ny tena fampiharana azy.
Ny haitao avo lenta sy ny asa-tananay dia mamela ny teknisianay hamorona prototype sarotra amin'ny mekanika miasa hijerena endrika sy mety, hiantohana ny faritra rehetra ao anaty fivoriambe ho an'ny fitaovana lafo vidy sy fitaovana maro karazana. Manomboka amin'ny prototyping ka hatramin'ny manufacturing, dia miantoka izahay fa ny fiasan'ny fitaovana sy ny fitaovana namboarinao manokana dia mifanaraka amin'ny zavatra ilainao sy antenainao.
Prototyping ara-barotra sy birao
Ny fahaiza-manaon'ny prototyping an'i CreatProto dia mifanaraka tsara amin'ny mpanamboatra fitaovana automatique sy birao (vokatra OA) miaraka amina singa vita amin'ny famaritana marina anao. Ny fivoaran'ny prototype dia hisolo tena ny toetran'ny vokatra farany, ao anatin'izany ny fahamendrehana dimensional ho an'ny fanangonana ny ampahany amin'ny fanambadiana, ny lesoka amin'ny famolavolana ary ny fahasamihafana sy fandeferana miafina.
Azontsika atao ny mampiasa ny traikefantsika ara-teknika amin'ny famolavolana milina CNC avo lenta ary fitaovana haingana mba hanomezana toro-hevitra tsara indrindra momba ny singa arakaraka ny fitaovana, ny fizotrany, ny fandeferana ary ny maminavina ireo olana mety hitranga hiatrehana ireo olan'ny injeniera ao aminao. Miaraka amin'ireo injeniera matihanina sy mpitantana ny tetikasa, ny CreProto dia tsy manam-paharoa amin'ny prototyping ny vokatra ary mitazona hatrany ny fiaraha-miasa tsy tapaka miaraka amin'ny mpanjifa, afaka manome fanohanana mitohy mandritra ny fampandrosoana ny vokatra.
Prototyping nomerika sy fitaovana
Eo amin'ny sehatry ny vokatra mpanjifa mifaninana, ny zavatra rehetra ataontsika eto amin'ny CreateProto dia mifantoka amin'ny fanomezana prototyping kalitao tsara indrindra amin'ny indostria - ara-potoana sy vidiny. CreateProto dia mamorona maodely fampisehoana an-tsary avo lenta izay mitovy amin'ny tena vokatra. Ireo modely prototyped ireo dia mety ampiasaina amin'ny vondrona ifantohana, fampisehoana varotra ary hetsika varotra sy marketing hafa.
Manomboka amin'ny solosaina ka hatramin'ny telefaona finday, ny fahitalavitra mipaka amin'ny mari-pana, ny CreProto dia manana traikefa 20 taona mahery amin'ny fampandrosoana ny prototype ny vokatra ho an'ny mpanjifa. Azontsika atao ny mamaly haingana ireo fepetra takiana amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny andro. Izahay dia miasa manohana tokana avy amin'ny milina prototype ka hatramin'ny farany vita. Alao sary an-tsaina haingana ireo vokatra mandritra ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny famolavolana ho an'ny tombana amin'ny maso ny endri-javatra, endrika, fiasa ary endrika sy fahatsapana amin'ny ankapobeny.
Manana fahaiza-manao marobe ao anatin'ny serivisinay sy ny fizotrany atolotray ny Prototype fampandrosoana ny vokatra indostria.
Cnc Prototyping, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana,